मात्तिइन् अन्जली / घमन्ड मोडल तथा नृत्यांगना अन्जली अधिकारीमा पनि देखा पर्न थालेको बताइन्छ । ~
- नेपाली सन्देश बुधबार, माघ ८, २०७६ , 7K जनाले हेर्नुभयो
चलचित्रका अभिनेता/अभिनेत्री हुन् वा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने नर्तक/नृत्यांगना, अलिकति चर्चामा आउनेबित्तिकै उनीहरू एक खालको नखरा देखाउन थालिहाल्छन् । यस्तै घमन्ड मोडल तथा नृत्यांगना अन्जली अधिकारीमा पनि देखा पर्न थालेको बताइन्छ ।
विगत चार वर्षदेखि म्युजिक भिडियोमा व्यस्त अधिकारी एक वर्ष अघि सार्वजनिक भएको बोलमाया गीतको भिडियोबाट आमदर्शकको नजरमा परेकी हुन् भने गलबन्दीले उनलाई थप चर्चामा ल्यायो । त्यससँगै अन्जलीको पारो चढेको संगीतकर्मीहरू बताउँछन् ।
अभिनयमा उत्कृष्ट अन्जलीलाई यही घमन्डले सिध्याउने त होइन ? कतिपय संगीतकर्मीको आशंका छ । एक स्रोतका अनुसार अन्जलीको व्यवहारकै कारण केही कोरियोग्राफर, सिनेम्याटोग्राफर तथा सर्जकसँग उनको सम्बन्ध चिसिएको छ ।
चर्चामा जो पनि आउँछन्, तर त्यसलाई यथावत् राख्न सक्नु कलाकारको विशेषता हो । त्यसैले अन्जलीले समयमै सचेत हुने हो कि ?
चितवनमा उपचारका क्रममा कोरोना संक्रमित एक वृद्धको मृत्यु
नेता विष्टले देश र जनताले अत्यन्तै पिडा भोगिरहेका बेला दशैं भत्ता नलिने
झापाका ६२ वर्षिय वृद्धले जिते कोरोनालाइ।
नेपालमा जेठ ६ गतेबाट यस्तो लकडाउन परिबर्तन गर्ने तयारीमा
कोरोनाबाट आमा गुमाएका शिशुमा रिपोर्ट नेगेटिभ देखियाे